Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogaden Community UK (OYSU UK) oo kaqeyb galay xuska Xasuuqa Sidama
Jaaliyada Ogaden Community UK (OYSU UK) oo kaqeyb galay xuska Xasuuqa Sidama
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK ayaa ka qeyb gashay xuska Xasuuqa Looqe ee qowmiyada Sidama loo geystay sanadkii 2002. Xuskan oo ka dhacay magaalada London ayaa jaaliyada Ogadeniya ee UK waxaa matalayay xubno kasocda Ururka OYSU iyo Maamulka Jaaliyada Ogadeniya ee London.
Jaaliyada somalida Ogadeniya ee wadanka UK ayaa kulankan kasoo jeediyay qudbad ay jaaliyadu kaga hadlaysay sida ay uga xunyihiin xasuuqa loo geystay qowmiyada Sidamada bishii May 24, 2002. Xasuuqaas oo ka dhacay duleedka magaala madaxda Sidama ee Hawaasa. Xasuuqaas ayaa gumeysiga Ethiopia ku dileen boqolaal shacab ah oo ay u badnaayeen ardey ciyaala Iskuul iyo dhalinyaro jaamacadeed, Sidoo kale haween, caruur, Poliska magalada, aqoon yahan iyo siyuaasiyiin. kuwaasoo banaanbax si nabad galyo ah u sameynaya ayaa ciidanka gumeysiga Abbysinia ku fureen xabad halkaasna ku dileen boqolaal shacab ah.
Jaaliyada Sidama ee wadanka UK ayaa xuskan si gaar ah ugu marti qaaday Jaaliyada Ogadeniya, Jaaliyada Oromada, Jaaliyada Kafficho, Jaaliyada Canfarta iyo jaaliyado badan oo kamid ah dadyowga ku hoos nool gumeysiga Ethiopia.
Waftiga Jaaliyada Ogadeniya kasocday ee kulankan ka qeyb galay ayaa waxaa hoggaminayay gudomiye ku xigeenka Jaaliyada London mudane Khalid oo halkaas kasoo jeediyay qudbad aad loo jecleystay oo uu kaga waramayo xasuuqa shacabka Somalida Ogadeniya. Sidoo Kale mudane Ducaale, Mustafe iyo cabdi rashiid ayaa iyana halkaas ka qeyb galay Pannel Discussion looga hadlayay sidii qowmiyadaha Oramada, Somalida Ogaden, Sidamaha iyo Kafficho ay isaga kaashan lahaayeen xasuuqa kasocda dhulkooda hooyo.
Kulankan ayaa doodo iyo aqoon isweydaarsi dhaxal gal ah kadib waxaa lagasoo saaray qodobo ay jaaliyadahaas kulankan isugu yimid kuwada shaqeyn doonaan gaar ahaan dhinaca arrimaha xuquuql insaanka iyo waliba iskaashi dhinacyo badan leh.